Archive du 20170413
Ravalomanana sy Rajaonarimampianina Vaky tanteraka ny ady
Mihamafana ny toe-draharaha mampifanditra ny ankolafy Ravalomanana sy ny fanjakana foibe, tarihin�i Hery Rajaonarimampianina.
Claudine Razaimamonjy Nandao ilay hopitaly nitsaboana azy
Omaly alarobia 12 aprily no niala tao amin�ny toerana nitsaboana azy dia ny Clinique Fortis Darn� de Curpipe any Maorisy Rtoa Claudine Razaimamonjy, araka ny fanazavana nomen�ny tompon�andraikitra avy ao amin�io toeram-pitsaboana io ary nisy ny taratasy manaporofo izany.
Printsy Zoendreniny Elakovelo Etsiosa Tsy vitan�ny petatoko ny fihavanana Malagasy
Tontosaina eny amin�ny tranombokim-pirenena Ampefiloha nanomboka omaly ny hetsika hateloana fanairana indray ny fanamboarana sy fanatsarana ny tranombako-paritra Mahafaly any Ampanihy Andrefana.
Fikambanana Silamo Malagasy Miezaka mambabo fo ny mpitondra
Amin�ny maha la�ka ny Antenimierandoholona dia noraisin�ny filoha Rokotomanana Honor� tao amin�ny lapan�Anosikely, ny talata 11 aprily teo, ireo delegasiona avy amin�ny FSM na Fikambanana Silamo Malagasy notarihin�ny filohany Hassim Mohamed.
Sao dia hanody e ?
Salama tsara ve ry Jean ? Nahoana no toa tsy dia henoheno sy mitsoatsoaka anay ? Mba manao ahoana izay i Dinina be any fa toa hoe efa tsy atsy Maorisy intsony ?
Vahoaka Malagasy Hozanahan�ireo mpanambola vahiny
Tsy rariny intsony ny zava-misy eto Madagasikara. Potika sy rava tanteraka ny fiarahamonina Malagasy.
Sabotsy Namehana Hifaly havanja
Tsiliva, Arnaah, J-Love (Mpanakanto iraisam-pirenena), Princia, Ma�tre Rufin, Jess Flavi One, Mijah, Kougar ary i Toyah. Ireo no mpanakanto samy goavana nofinidin�ny Metis Prod,
Kaompania �Corsair� Hampitohy an�Antananarivo sy La R�union
Vitsy lavitra hatreto ireo teratany renioney tonga mitsidika an�i Madagasikara (130.000) mihoatra amin�ireo mpizahatany mihazo ny nosy Maorisy (500.000).
Sekoly Madecasse Mankalaza ny fahenim-polo taonany
1957-2017 ! Feno 60 taona ankehitriny ny sekoly Madecasse. Teny Andravoahangy no niandohany ary ankehitriny dia efa eny Ampasika sy Bemasoandro ary Ambohijafy Itaosy no misy azy.
Tanora Malagasy Tsy mahalala ny fianarana tokony hataony ny ankamaroany
Mbola betsaka ireo ankizy sy tanora tsy mahalala akory ny fianarana tokony hataony eto amintsika, araka ny fanadihadiana nataon�ny fikambanana Fanorina teny anivon�ireny sekoly isan-tsokajiny ireny.
EPP Andranovao Ambohimangakely Nohavaozina tanteraka
Nasiam-panavaozana tanteraka ny sekoly ambaratonga fototra ao Andranovao Ambohimangakely.
Fanabeazana mampiaty Nodinihina ny fampiharana azy ho an�ny rehetra
Ny 20 %-n�ny mponina eto amintsika no fantatra fa tratry ny fahasembanana.
Fanamboarana ny tranombakoka Mahafaly 400 tapitrisa ariary no ilaina
Efa tamin�ny taona 1999 no naorina tao Ampanihy Andrefana ny tranombakoka Mahafaly saingy io omaly io vao nampahafantarina tamin�ny fomba ofisialy tetsy amin�ny tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha ny fisiany.